Askar u dhalatay Fiitnaam oo lagu la’yahay dhul go’ ka dhacay xero ay ku sugnaayeen | Somalia News
Askar u dhalatay Fiitnaam oo lagu la’yahay dhul go’ ka dhacay xero ay ku sugnaayeen
HANOI (HALBEEG) – Dhul-go’ ka dhacay saaka aroortii xero ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan Milatariga Fiitnaam ayaa lagu la’yahay 22 askari nolol iyo geeri, sida ay sheegtay dowladdu.
Fiitnaam ayaa muddo sannado ah wajaheysa daadad xooggan oo ku dhuftay dalkaasi.
Roobab mahiigaan ah oo tan iyo billowgii Oktoobar ka da’ayey bartamaha Fiitnaam ayaa sababay dhimashada in kabadan 60 qof iyadoo roobab kale la filayo in ka da’aan gobolka.
Dhul-go’a ayaa ka dhacay xero weyn oo ay deganaayeen cutub ka tirsan ciidamada Milatariga dalkaasi sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay dowladda, dhacdadaan ayaa imaaneysa maalmo uun kaddib markii dhul-go’ ka dhacay isla bartamaha dalkaasi uu dilay 13 qof.
“Waxaa nasoo martay habeen kale oo hurdo la’aan ah” ayuu si dareen leh warbaahinta ugu sheegay Wasiir ku xigeenka difaaca fiitnaam Mr Phan Van Giang.
Previous articleXILDHIBAANKII DEEQSINIMADA EEDAY..! Xildhibaan Siciid Nuur.
Next article“Ma Jiro Saami Ka Maqan Gobolka Awdal” Siyaasi Maxamed Xaashi